नेपाली मनहरू nepalimanharu.com (शिव प्रकाश ): फूलको चोट
उल्टो भइरहेछ उसको जीवनमा
सधै, सबै कुरा ! छातीमा ढुङ्गा
बज्रदा उसले त्यति पीडाको अनुभूत गरेन जति एउटा कोमल फूलको चोटबाट गर्यो । उसलाई
कथा थाह छैन तर "हरेक
मान्छेको विगतलाई विउँझाएर वर्तमानमा ल्याउँदा कथा बन्दो रहेछ" उ
अहिले आफ्नै कथा आफैं भनिरहेछ – म सुनिरहेँछु "फूलको
चोटको कथा !"
उसले सेतो फूल मन पराउन
छोडेको छ !
ढुङ्गाको चोटभन्दा फूलको
चोट झन् गहिरो र झन्
पीडादायक हुँदोरहेछ । निको भएर जाँदोरहेछ ढुंगाको चोट तर कहिल्यै निको नहुदोरहेछ
फूलको चोट ! त्यति कोमल फूलले कठोर ढुङ्गाको भन्दा कति गहिरो
चोट लाउँदो रहेछ मनमुटुलाई सधैं दुखाइरहने, चस्सचस्स भित्रभित्रै घोचिरहने,
विजाइरहने ? अचानोलाई मात्र थाह हुन्छ खुकुरीको चोट, मलाइ मात्र थाह छ फूलको चोट ।
कठोर भन्थे ढुंगो तर झन् कठोर हुन्छ फूल ! उ भन्दै छ ।
सीताशालाई सम्झदाँ म सधै त्यो सेतोफूल सम्झन्छु । त्यो फूल सम्झदा सीताशा
सम्झन्छु । नसम्झु
भन्दा पनि विर्सेर सम्झन्छु । मुटुमा
बिजेको काँडा भएर बसेको छ त्यो सेतोफूल मेरो छातीभित्र ! खुशीका क्षणहरु सम्झन्छु तर ती क्षणहरुसँगै पीडाका भेलहरु उर्लेर आउँछन् । अनि भित्रभित्रै अझै म आतंकित हुन्छ "कतै ती भेलले मलाई फेरि नबगाउन् ।" म
आफूलाई अझै भयभीत पाउँछ ।
पन्ध्र वर्ष वितिसकेको छ
। पन्ध्रवर्ष वितिसक्दा पनि सीताशाका वारेमा मभित्र अझै द्धन्द छ । मानौं मभित्र एकप्रकारको युद्ध चलिरहेछ ! म आफैं एउटा युद्धभूमि भइरहेछु र युद्घ अघि नै युद्ध हारेको
नायक पनि ! दुबैपक्षको नेतृत्व म आफैंले गरेको छु । यो युद्धमा म आफै एक अर्काको शत्रु र
सहयोगी भएर उभिएको छु । आफैंलाई हराएर आफैंलाई जिताएको छु ।
सीताशा ठीक थिई वा आफू
गतल थिए ? सीताशा गलत थिइ वा आफू ठीक थिएँ ? युद्ध निरन्तर छ मभित्र ! सीताशा-शिवासु ! शिवासु-सीताशा ! गलत-ठीक ! ठीक-गलत
! एउटा भीषण मनोवैज्ञानिक युद्ध विभिषिका मेरो मनमस्तिष्कमा अझै मडारिरहेछ । म मुक्ति चाहन्छु यो द्वन्दबाट तर न सीताशालाई विर्सन सक्छु न त्यो फूललाई ! न त आफ्नो त्यो भूललाई ! मैले त्यो फूलालाई सीताशा
सम्झिए, सीताशालाई फूल ।
म सोच्छु - “द्वन्दको कारण सीताशा हैन, फूल हो । हैन, द्वन्छको कारण फूल हैन; सीताशा हो । सीताशा
र फूल दुबै होइन
म नै हो । दुबै थरी सोच्छ, दुबै थरी स्वीकार्छ, दुबै थरी नकार्छ ! हो
पनि ! होइन पनि, हो
पनि ! सायद मान्छेमात्र यस्तो प्राणी हो - जो हो र होइनको विचित्र व्यवहार र
अनिश्चित विचारभित्र बाँचेको हुन्छ । मेरो विश्लेषण हो यो मान्छेका बारेमा- हो पनि, होइन पनि; होइन पनि र हो पनि ! कुनै
कुराको निश्चितता छैन मान्छेमा । पशु भए बरू एक निश्चित विधि
र व्यवहारमा बस्थ्यो तर मान्छे ! कुकुरले विष्टा खान्छ तर निष्ठा
खाँदैन । बाघले मासु खान्छ, नपाए भोकै मर्छ तर घाँस कहिल्यै खाँदैन । मान्छेले त
विष्ठा पनि खान्छ, निष्ठा पनि खान्छ । मासु पनि खान्छ, घाँस पनि खान्छ । मान्छेभित्र
विचित्रको चित्र हुन्छ । त्यसैले त मान्छेको सबैभन्दा नजिकको साथी पनि मान्छे र
सबैभन्दा ठूलो शत्रु पनि मान्छे नै भएको छ । सबैभन्दा विश्वासिलो पनि मान्छे नै
हुन्छ र सबैभन्दा घातक पनि मान्छै नै !”
। पन्ध्र वर्षमा मैले
एउटी आइमाईमान्छे सीताशालाई चिन्न सकिन । सीताशालाई चिन्न नसक्नु
भनेको म आफैंले आफैंलाई चिन्न नसक्नु पनि हो । मान्छेको परिचय मान्छेले कहिले पाउने ? म आफैंसँग
प्रश्न गर्छु । विश्वाश नगेर घात हुदैन, आस नगरे निराश हुनु पर्दैन । मैले पहिल्यै
यो किन सोच्न सकिन । यो मेरै कमजोरी हो । मभित्रको मलाइ मैले चिनिन र त मैले
विश्वास र आश दुबै गरेँ । म अझै रनभुल्लमा छ । यो संसारले नबुझ्ने र नसुन्ने एउटा
प्रश्न यही संसारलाई गर्छु - 'मान्छे
सबै म जस्तै
हुन् कि म अरु सबै मान्छे जस्तो हुँ ?' मेरा यस्ता
हरेक प्रश्न त्यो फूलसँग सम्वन्धित छन् । हरेक घटनापरिघटना, दृष्यपरिदृष्य सबै त्यो
फूलसँग गाँसिएका छन् । अर्थात त्यो फूल नहुदो हो त यी कुनै कुरा हुदैनथे ! अथवा सीताशा नहुदी
हो त त्यो फूल पनि हुदैनथ्यो ! अथवा त्यो फूल त्यतिबेला नै फ्याकिदिएको भए सायद
सम्झनाका कठोर काँडाहरू विझिरहदैन थे होला !
सीतासाको नाउँसँगै सधैं
त्यो सेतोफूल सम्झन्छु ।
वास्तवमा सम्झनु पनि पर्देन नदी सम्झने वित्तिकै पानीको विम्ब आए जस्तै सीताशासँग
फूलको विम्ब आउँछ,
फूलसँग सीताको विम्ब । नदीको पर्याय पानी भए
जस्तै सीतासाको पर्याय फूल भएको छ, फूलको पर्याय सीताशा । त्यो सेतोफूल तर फूल धेरै प्रकारका हुन्छन् र मान्छे पनि ! मैले एउटा कविता पढेको छु-
उपमा छ आत्मीयतको, वैभव छ विश्वासको
तर फूलभित्र काँडा पनि
हुन्छ ! फूल कागजको पनि
फूल सम्झेर सुम्सुम्याएको
सीतासाभित्र तिखारिएर बसेका विषालुकाँडाको अनुभव मैले गरसिकेको छु । अब न फूलप्रति विश्वास
हुन्छ मलाई न
मान्छेप्रति ! न प्रेमप्रति !
सीताशासँग हिडेका बाटाहरु
सम्झन्छु, पाटाहरु सम्झन्छु । खेतबारीहरु सम्झन्छु, उकालीओरालीहरु सम्झन्छु । हातहरु सम्झन्छु, साथहरु सम्झन्छु । बरसातहरू सम्झन्छु, सँगै विताएका रातहरु सम्झन्छु । रातका मातहरु सम्झन्छु, रातका बातहरु सम्झन्छु । रातको मौनता सम्झन्छु, रातको मादकता सम्झन्छु । रात बौलाएको सम्झन्छु रात मुर्झाएको सम्झन्छु । घोडा चढेको सभ्झन्छु, बग्गी चढेको सम्झन्छु । समुन्द्रको किनार सझन्छु, जंगलको बाटो सम्झन्छु । हिउँका फाल्सा सझन्छु, गाउँका खोल्सा सम्झन्छु । खेतबारीका आली सम्झन्छु,
कान्ला पाखा सम्झन्छु । शरह सम्झन्छु, गाउँ
हिलो सम्झन्छु, धूलो सम्झन्छु । अनि प्रत्येक सम्झनासँगै त्यो फूल सम्झन्छु ।
सीताशाबाट मैले केही राम्रा कुराहरु पनि सिक्ने मौका पाउँछु ती सबै
सम्झन्छु तर ती सँगै त्यो फूल सधैं गाँसिएर आउँछ । राम्रासँगै केही नराम्रा कुराहरु पनि सिक्छु ती पनि सबै सम्झन्छु । ती सबैसंग त्यो फूल उनिएर आउँछ । फूल-सीताशा ! सीताशा-फूल ! काँडा
भएको छ त्यो फूल, मेरो मुटु छेड्ने त्यो शूल…त्यो सेतोफूल !
झिनो निष्कर्ष निकाल्छु -
मैले आफूलाई भन्दा सीताशालाई बढी चिनेको छु । यस
अर्थमा चिनेको छु कि मैले आफूलाई सम्पूर्णरुपले देख्न सक्दिन तर सीताशालाई सम्पूर्ण देखेको छु । सीताशाले मलाई लुकाउँन बाँकी नै के थियो र ? अब
उसले मसँग केही लुकाउदिन । यदाकदा मभित्र शंकाका झिल्का उछिट्टिए पनि विश्वासको
वाफले निभाउथ्यो तर म भ्रममा रहेछुँ । मैले सीताशाको शरीर पो देखेँ त, मन त
कहिल्यै देखिन । मन र पानी आखिर उस्तै हुँदो रेहछ । न आकार देखिने न रंग देखिने ! चीसो भए जम्ने बरफ जस्तो
हुने, तातो भए उड्ने, भाँडा अनुसार अकार र रंग लिने । अवस्था अनुसार बदलिने । पानीमा रंग देख्नु र मान्छेको मन चिन्नु उस्तै
रहेछ । नदेखेको
मन चिन्नु कसरी ? मेरो भ्रममात्र रहेछ । मेरो निष्कर्ष छ- “मान्छे हजार वर्ष
बाँच्यो भने पनि उसलाई चिन्न सकिदैन । हजार वर्ष संगत गरे पनि उसलाई आफ्न बनाउन सकिदैन ।”
हरेक फूल देख्दा म सीताशा सम्झन्छु । सीताशा जस्ता हरेक आइमाइहरु देख्दा म त्यो सेतोफूल सम्झन्छु । सीतासालाई चाहेर पनि विर्सन सक्दिन र सम्झन पनि चाँहदैन । तर विडम्बना …सोचेजस्तो जीवन र जीवन जस्तो सोचाइ कहाँ हुन्छ र ! सीताशा
पनि छे, त्यो
फूल पनि छ । सीतासा अझै हाँसिरहेकी छे यो धरीतमा । त्यो फूल पनि अझै सुरक्षित छ कतै कुनै मेरो कितावको
पत्रमा तर त्यो फूलको चोट अझै
हृदयमा ! सायद सीताशालाई त्यो फूलको कुनै हेक्का छैन । सीतासाले यस्ता फूल धेरैलाई दिएकी हुन सक्छे ।
शिवासु जस्ता पात्रहरू चौतरीका वटुवाहरू जस्तो
हुन सक्छन् उनको जीवनमा । किताबका हरेक पानाका फरक विषयका
पाठहरू जस्तै हुन सक्छन् म जस्ता शिवासुहरू सीताशाहरूका लागि ।
त्यो दिन साँझ झमक्क
परिसकेको थियो । गेटमा उभिएर सीताशाले मलाई हातमा सेतोफूल, गालामा रातो हुनेगरि चुम्बन र हृदयभरीको शुभकामना दिएर
विदा गरेकी थिई । सीताशाका शव्दहरु सम्झन्छु- 'शिवासु धेरैधेरै
शुभाकामना ! तर विदेश गएर यताउता धेरै नबरालिनु, यसपटका तिम्रो पालो । तिमी जानु र म जानु भनेको एकै हो, शुभकामना …! जागीर खाएको दश वर्ष भै सकेको छ, मेरो जागिरे जीवनको यो पहिलो विदेश भ्रमण ! मभित्र उद्वेलित उत्सुकता र कौतुहलताहरु त्यतिबेलामात्र
अलि शान्त हुनेछन् जतिबेला म बोइङ्को ढोकामा हुनेछु । एक दिन कै लागि भए पनि विदेश जानु भनेको हाम्रो समाजमा
यसै पनि इज्जतिलो ठानिन्छ, त्यसमाथि अफिसियल भ्रमणमा ! अझै त्यसमाथि करीव एक महिनाको भ्रमण ! अझ त्यसमाथि सुख्खा जागिरेका लागि एउटा रसिलो र भरिलो आम्दानी
। सोचेँ - 'जीवनमा पहिलोपटक डलर पनि
देख्ने पाइने भइयो
। म फुरुक्क परेर घर फर्किएँ । फर्कदा मैले जीवनमा
पहिलो पटक आफ्नो
कमाइले पुरा एक किलो खसीको मासु
किने । अनि साथमा
एक क्वाटर मेन्जो
पनि ! खुशीको सीमा रहेन घर आइपुगेको थाहै भएन । सीताशाप्रति विशेष शिष्टाचार तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्नु
मेरो कर्तव्य ठाने र फोन गरेँ, उठेन ! आधाघण्टा पछि फेरि गरेँ, फेरि उठेन ! किन
फोन उठेन ? मनमनै सोचेँ, किनमा मात्र एकछिन अल्झिएँ अरू केही सोचिन । अर्कोआघा घण्टा पछि फेरी गरेँ, फेरि उठेन ! खसीको
भूटुवासँग मेन्जो तान्दै आफूभित्र
उद्वेलित खुशी बाड्न म आतुर थिएँ
। त्यो खुशीमा म छताछुल्ल हुन चाहन्थे । कता पोखुँ कता पोखुँ भइरहेको थियो ।
सीताशा बाहेक मेरो विश्वासिलो र अन्तरंग अरू कोही छैनन् । लगातार केहीबेर फोन गरिरहेँ,
उठ्दै उठ्दैन । अब हरेक आधाघण्टामा गरिरहेँ, बल्ल घण्टौं पछि फोन उठ्यो
तर फोनमा आवाज अर्कै थियो ! साधेँ – “तपाइँ को ?” जवाफमा
गर्ने देवकी' भन्ने
आयो । सीताशा का
बारेमा सोधेँ - 'दिदी
आउने वित्तिकै बाहिर जानु भो र बाहिरबाट आउने वित्तिकै घप्लक्क सुत्नु भो' ।' अपत्यारिलो जवाफले आश्चार्यको आकाश ममाथि नै खनिए जस्तो भयो ! एकछिन टोलाएँ, मेन्जो
तान्दै आफूलाई खुशीको संसारमा फेरि
दौडाएँ । मरो मनका खुशीले रातभर रातसँग बातमारी रहे, निदाइन अनेक सोचेँ । बुबाले धेरै
दिनदेखि चाहना गरेको अटोमेटिक
साइको फाइभ घडी
। सुनको चुरा लाउने आमाको
सधैंको भित्री रहर । भाइबैनीलाई
राम्राराम्रा लत्ताकपडा । श्रीमतीलाई एउटा मोतीको
माला । छोरालाई मन पर्ने खेलौना । यी सबै अब
पुरा हुने भए । हिसाब गरेँ- मेरो
भत्ताको पैसाले यी सबै आउँछन् । जागिर खाएदेखि त्यो दिन पहिलो पल्ट अनठौ स्फूर्ति आएको थियो, भित्रै मनसम्म खुशी छाएको थियो । खुट्टा भुँइमै भएता पनि मन बोइङ्गमा उडिरहेको
थियो । “अब सारा साथीभाइबाट वधाइ पाइने भइयो” कल्पनापरिकल्पना लहरमा तैरदै भोलिपल्ट सबेरै
म अफिस पुगेँ तर अफिसको सूचनापाटीमा मेरो नाउँ थिएन । मलाई
विश्वास लागेन दोहोर्याए हेरेँ, तेहेर्याएर हेरेँ जति हेर्दा पनि शिवासु देखेनन्
मेरा आँखाले ! एक तमासले एकछिन हेरिरहेँ ।
आकाशमा स्वच्छन्द उड्दाउड्दैको पंक्षी
पखेटा चुडिएर खसे जस्तो भएँ । बालुवामा पानी जस्ता भए
मेरा सपना । एउटा श्लोक सम्झिएँ– “विश्वासो
नैव कर्तव्यः स्त्रीपु राजकुलेसुचः ।” त्यो सीटमा एकमात्र
निर्विकल्प उमेद्वार भनेर सीताशाको नाउँ टाँसिएको थियो । नारीप्रतिको
मेरो धारणा नकारात्मक हुदै गयो । सोचेँ, धेरै सोचेँ । रित्तो अफिस कोठामा घोप्टे
मुन्टो लाएर सोचेँ । के नारीहरू विश्वासका पात्र हुन् सक्दैनन ? के शास्त्रले
भनेको कुरा साँचो हो ? अविश्वास नै नारीको आत्मा हो ? होइन, सबै सिक्का खोटा हुन
सक्दैनन् । एउटा खोटो सिक्का देखियो भने सबैलाई किन दोष दिने ? सबै नारी सीताशा
हैनन् र हुन पनि सक्दैनन् । नारी त प्रेम स्नेहको पाठशाला हो, दयाको दीयो हो । म
किन एउटी सीताशाका लागि सम्पूर्ण नारीलाई दोषी बनाएर त्यो पाठशालालाई वधशाला बनाऊ ? यो मेरो अर्को भूल हुनेछ, सीताशालाई चिन्न
नसके जस्तो भूल । सम्पूर्ण नारीलाई चिन्न नसकेको भूल ।
अफिसको त्यही टेबुलमा निधार घोप्टाएर बसेको छु
। सीताशाको घरैछेउमै डेरा बस्ने मरो सहायकले खुसुक्क कानमा भन्यो - 'सर सीताशा म्यामलाई
हिजोराति अबेला मन्त्रीको गाडीले पुर्याउन आएको देखेको थिएँ ।'
शिवासुले त्यो दिनदेखि
सेतोफूल मन पराउन छाडेको छ । “प्रेम र मित्रता एउटा डुंगा हो भने स्वार्थ अर्को डुंगा हो । जुन डुंगामा सबै प्रेमी र मित्रहरुले दुबै खुट्टा हालेका हुदैनन् । दुइटा डुंगामा दुइटा खुट्टा हालेर
तैरनेहरूले थाहै नपाइ एउटा खुट्टा झिकिदिन्छन् । जन्मसँगै मृत्युले पनि जन्म लिन्छ
। मित्रता र प्रेमसँगै स्वार्थले घात-प्रतिघात
पनि जन्माएको हुन्छ । विश्वास नै नगर अविश्वास नै हुदैन,
प्रेम नै नगर घात नै हुदैन” - मैले सुनिरहे ।
मित्रता ! मित्रताभित्रबाट प्रेम !
प्रेमभित्रबाट घात ।
घातभित्रबाट प्रतिघात । अनि घात-प्रतिघातबाट शत्रुता ! शत्रुताभित्रबाट पुनः मित्रता !
यसरी नै सुनायो शिवासुले त्यो फूलको कथा !
prawashAugust 3, 2009 at 8:48 AMकथाले मानिसको स्वार्थी प्रवृतीलाई नंगाएको छ । प्रेम र प्रेम भित्रको घातलाई कथाकारले रोचक ढंगले पस्कनु भएको छ।ReplyDeleteAdd commentLoad more...